“ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ လူကြည့်များနေတဲ့ မျက်နှာအလှပြင်နည်း ဗီဒီယို “ – ရှအေလငျး
“ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ လူကြည့်များနေတဲ့ မျက်နှာအလှပြင်နည်း ဗီဒီယို “
လူမှုကွန်ရက်မှာ လူကြည့်များနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖြစ်ပြီး မျက်နှာမှာ အဆီပိုတွေကျသွားပြီး လှပစေရန်အတွက် အဆင့်ဆင့် လုပ်ပြနေတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်….
သွယ်ပြီး လှပတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်ဖြစ်စေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်…လက်တွေ သင်ပြနေတဲ့ ဆရာမဖြစ်ပါတယ်….
လူမှုကှနျရကျမှာ လူကွညျ့မြားနတေဲ့ ဗီဒီယိုဖွဈပွီး မကျြနှာမှာ အဆီပိုတှကေသြှားပွီး လှပစရေနျအတှကျ အဆငျ့ဆငျ့ လုပျပွနတေဲ့ ရုပျသံဖိုငျပဲဖွဈပါတယျ….
သှယျပွီး လှပတဲ့ မကျြနှာပိုငျရှငျဖွဈစဖေို့ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျနညျး အဆငျ့ဆငျ့…လကျတှေ သငျပွနတေဲ့ ဆရာမဖွဈပါတယျ….
2018 Global Martial Arts Awards ဆု5ဆု ရဲ့ ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ အောင်လ အန်ဆန်း
မနက်ဖြန် ချမ်းမြေ့မောင်ချို လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ဖြိုးမြတ်အောင်ကို Winner ဆု ပေးမည် .
လောကကြီး ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲ… 😨 စာသင်​​နေတုန်း မိုးကြိုးပစ်​ချမှုကြောင့် ဆရာမတစ်​ဦးနှင့် ​ကျောင်းသူ ၁၀ဦး၊ ရွာသား အချို့ မိုးကြိုးစက်ကွင်းမိ.
အသက် (၇၂) နှစ်ရောက်မှအကယ်ဒမီ အတွက် စပွန်ဆာရဖူးတယ်လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း
ပရိသတ်အားပေးတဲ့ အနုပညာအပေါ် နေတိုးရဲ့ ရည်မှန်းချက်
သွေးကင်ဆာနဲ့ဆုံးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက်ကျတဲ့ နန်းမွေ မျက်ရည် 😭